Air New Zealand fiidiyowga badbaadada cusub wuxuu leeyahay 80s / 90s nostalgia
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Air New Zealand fiidiyowga badbaadada cusub wuxuu leeyahay 80s / 90s nostalgia
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka New Zealand • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • dhaqanka • News • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka
Fiidiyowga badbaadada guriga ee New New Zealand waa Amniga Kiwi maanta ayaa la bilaabay.
Fiidiyowga badbaadada waxaa taageeraya codka "Waa Kiwi" oo ah dib u habeyntii heesta caanka ah ee RUN-DMC "Waa Khiyaano" iyo "Xaafadda" ee Walaalaha Dhulka Hoostooda, oo ay soo saartay Josh Fountain oo ka mid ah Istuudiyaha Da'da Dahabiga ah ee Auckland.
Maareeyaha Guud ee Air New Zealand Global Brand iyo Suuqgeynta Mawduuca Jodi Williams ayaa sheegtay in fiidiyowgan badbaadada cusub uu ugu dabaaldegayo dadka reer New Zealand ciyaar xiiso leh oo firfircoon oo ku saabsan fiidiyowyada caanka ah ee badbaadada shirkadda.
Fiidiyowga cusub ee badbaadada ayaa laga bilaabi doonaa maanta wixii ka dambeeya duulimaadyada shirkadda.
Si loogu dabaaldego fiidiyowgeeda nabadgelyo ee ugu dambeeyay ee Air New Zealand ayaa sidoo kale soo saartay majaladda November Kia Ora oo leh lix dabool oo kala duwan si ay u muujiso tiro ka mid ah xiddigaha fiidiyowga badbaadada. Tani waa markii ugu horreysay taariikhda majaladda daabacaaddeeda billaha ah la sii daayo iyadoo leh lix dabool oo kala duwan.
WHO & IATA: Mawjadda 3aad ee COVID si dhakhso leh ayey ugu faaftaa ...